Wararka Maanta: Khamiis, Feb 12, 2009-Nuxurka Heshiis ay kala saxeexdeen Saddexda Xisbi Siyaasadeed iyo Guddida Doorashooyinka Somaliland
Wakiillada Seddexda Xisbi ee Somaliland iyo Guddiga Doorashada. SAWIRKA: BARQAD KAARIYE/HOL
Munaasibaddii Saxeexa Heshiiskan oo ay ka qayb galeen Masuuliyiin ka kala socoday Saddexda Xisbiga Siyaasi, Komishanka, Akaademiga Nabadda iyo Horumarinta iyo marti-sharaf kale, ayaa ugu horrayn waxa halkaa ka hadlay Guddoomiyaha Guddida Doorashooyinka Jaamac Maxamed Cumar (Sweden) oo ku dheeraaday faa’iidada Diiwaangelinta, waxaanu sheegay in guulo waawayn laga gaadhay, balse wuxu qiray in ay jireen khaladaadka dhacay oo ah in dadku ku laba-jeer noqdaan iyo khaladaad guud oo Diiwaangelinta khusaysa. “Server-ka waxa ku jira ilaa Milyan iyo Lix boqol oo Qof oo isku jira, una baahan in la kala saaro oo la shaandheeyo..Heshiiskeenan waxa kow ka ah shaqada sida loo qabanayo, habka loo marayo iyo in ay inoo bilaabanto. Waxay ku bilaabmaysaa, waad ogtihiin oo hawshii (Diiwaangelintu) waxay dhammaatay maalin muddo laga joogo, laakiin waxa halkan soo gaadhsiiyey ee loo fadhiyaa waa in Xisbiyadii Qaranku ay heshiis midaysan ka yeeshaan oo ka aynu maanta (shalay) u fadhino ah. Halkaas ayaa kow inoo ah inaynu hore uga socono, wixii kale ee halkaa dhaafa waa Jadwalkii, sidii bahalkani ku dhammaan lahaa iyo sidii Dooorashadii iyo hawlihii ku xigay oo aan hawl-yarayn loo geli lahaa. ….. Markaad idinku (Axsaabta) heshiisaan, ayaanu Anaguna wax ka qaban karnaa..wixii intaa dhaafsiinani waa in Doorasho iyo kharashkii lagu qaban lahaa la, waxaas oo dhan-na waad ogaydeen oo Ilaa maalintii aanu hawshan bilownay waad ogaydeen inta goor ee wuxu dib u dhaceen oo dan uun baa dib u ridaysay, tan maanta socota oo kale ayuun bay ahayd oo Lacag aanad haynin iyo wax aan Gacantayada ku jirin markaanu ku ballan-qaadno waad dareemaysaan.” Ayuu yidhi Gudoomiyaha Komishanku waxaana uu soo jeediyay in labada maalmood ee soo socda uu hawl-galo Server-ku iyo in Xisbiyadu khuburo aqoon u leh hawsha oo la hawl-gala Komishanka ay dirsadaan.
Markaa ka dib waxa nuxurka Heshiiska oo ah go’aan uu Komishanka Doorashooyinku kaga hadlayay Server-ka,
Akhriyay Xasan Maxamed (Looshade) oo akhriyay Lifaaqa Heshiiska la saxeexay. Waxana uu u dhignaa oo uu yidhi. “Komishanka Doorashooyinka Qaranku isaga oo raacaya Xeerka Doorashooyinka ee Lr. 20/2001 iyo Xeerka Diiwaangelinta Codbixiyayaasha 37/2007 iyo lifaaqiisa wax-ka-bedel iyo kaabis ee qeexaya awoodaha sharci ee Komishanka Doorashooyinka Qaranka. Ka dib markii uu arkay hawsha baaxadda weyn leh ee dhammaystirka hawsha Server-ka ee kala saaridda wixii ku noq-noqod ah ama khaladaad dhacay, taas oo saamaysay dalka oo dhan, loona baahan yahay in laga saaro waxa khaldan oo dhan, si Diiwaangelinta Somaliland u noqoto mid xalaal ah oo waafaqsan Nidaamka Caalamiga ah. Haddaba, Komishanka Doorashooyinka Qaranku iyaga oo maanka ku haya in arrinta Server-ku saamayn ku leedahay hawlaha Doorashada, ayay shirar joogto ah, doodo iyo falanqayn socday labada maalmood ee ina dhaafay ay go’aan xubnuhu u dhan yihiin ku gaadheen qoddobada hoos ku qoran;
Intaa ka dib waxa loo guda-galay hawsha loo tagay Xarunta Komishanka oo ay goob joog ka ahaayeen dhamaan dhinacyada ay khusaysaa.. waxana markaa ka maagay inuu saxeexo Xisbiga talada haya ee UDUB. “Suurtogal ma tahay in aad waqti na siisaan oo iyada oo aanay taariikhdu dib u dhicin, isla maanta (shalay) gelinka dambe ilaa 4:00 galabnimo iyada oo aan buuq jirin Xisbi walba uu Xoghayaha guud iyo laba qof ka yimaaddo, si loo soo akhriyo oo laga soo baaraan-dego waxa meesha ku qoran.” Sidaa waxa ku dooday xoghayaha guud ee Xisbiga UDUB Jaamac, hase ahaatee, hadalkaas waxa ka biyo diiday Xisbiyada Mucaaradka ah. “Ninkii isagu wax soo hubsanayaa xaq buu u leeyahay, laakiin Anagu (Kulmiye) waxaan u malaynayaa in UCID-na nala qabtee, sidaas ayuun baanu ku saxeexaynaa.” Sidaa waxa isaga oo daba jooga dhawaaqa Xoghayaha UDUB kaga dhawaaqay Madasha Gudoomiye ku xigeenka koobaad ee Kulmiye Muuse Biixi Cabdi.
Waa sii socotay doodu waxana soo galay oo hadalka Qaatay Cismaan Cabdilaahi Cigaal (Cismaan Hindi)oo ka mid ahaa masuuliyiinta matalayay Xisbiga UDUB. “Waxaan u malaynaa in labada Xisbi ee kale aad hore u siiseen oo ay soo akhristeen, sidaas ayay ugu dhiiran yihiin in ay saxeexaan. Laakiin, Anagu waa markii ugu horaysay ee aanu helno Lifaaqan, cadaalad-na maaha taasi. waxa aanaan ka soo baaraan-degin oo aananu akhriyin, haddii iyaga las iiyay oo ay iyagu saxeexayaan waa halkooda, balse waa in laba saacadood ilaa saddex saacadood nala siiyo oo aanu ka soo baaraan-degno weeye,.”ayuu yidhi Cismaan
Xog-hayaha guud ee Xisbiga UCID ayaa sidoo kale muujiyay sida loogu baahanyahay in la fuliyo hawsha si ay hore arrimuhu ugu kala socdaa. “Maalintii hore ee aynu korodhsiimaha ka qaybgalaynay ee muddada la kordhinayay maalin adag bay ahayd, maantana maalintii ayuun bay ka kaabaysaa oo ay daba taagan tahay. Arrinta diiwaangelinta waxaynu u galnay in aynu helno cod xalaal ah oo saafi ah in lagu kala badiyo oo lagu kala helo, dad baa inaga caawiyay oo Lacag badan inaga siiyay oo 20-Milyan oo Dollar lacag ku dhaw ayaa lagu bixiyay, in ay bilaash ku lunto oo hawshii Qaranka, Dadka iyo cid walba gashay waa arrin aan fiicnayn..arrintani bilow bay inagu tahay, khaladaad badan baa ka dhacay, khaladaadka dhacayna cid waliba qayb bay ku leedahay. Waxse aynu isku dayaynaa in aynu saxno. Ha loo guntado oo Komishanku ha u diyaar-garoobaan hawsha bilowgeedii.” Ayuu yidhi Xoghayaha UCID talaata Codleh.